स्विस ब्रान्ड दुई-wheeled परिवहन उपकरण को प्रशंसक बीच IXS राम्रो-योग्य सम्मान उठाउँछ। धेरै racers यस विशेष निर्माता को उत्पादन को लागि रोज्नुहोस्। हाम्रो समीक्षा हेलमेट बारेमा भन्नेछु र सही टाउको सुरक्षा को खोज मा सास्ती निम्ति उपयोगी हुनेछ।
IXS हेलमेटहरु पूरा सबै वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताहरु। निर्माता तिनीहरूलाई मा embodied र सान्त्वना को विचार सवारी चलाउँदा।
ठोस लामबद्ध ब्रान्ड फरक निर्देशनहरू प्रतिनिधिको अगाडि एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। तपाईं रुचि छैन चढेर कम्पनी निर्देशिका को के शैली तपाईंलाई लागि हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन बाध्य छन्।
इतिहास IXS एक सताब्दी अघि भन्दा बढी थाले। एक पटक एउटा सानो मर्मत मा साइकिल र अन्य दुई-wheeled उपकरण मर्मत, यो मा नयाँ जीवन सास संलग्न थियो। बिस्तारै कम्पनी बलियो हुँदै गयो। र अन्तिम शताब्दीको बीचमा द्वारा यो "वेल्स" बाट एउटा सम्झौता सम्मानित थियो र स्विट्जरल्याण्ड मा आधिकारिक बिक्रेता भयो स्थिति यति बलियो लिएको छ।
देर '70s मा गियर को उत्पादन सुरु भयो। अन्य कुराहरु, यो मोटरसाइकल हेलमेट IXS को उत्पादन सुरु भयो। आज ब्रान्ड उत्पादन संसारभरि धेरै देशहरूमा उपलब्ध छन्।
ड्राइभिङ शैली कस्तो खरीदार रुचि, र यो मोटरसाइकल टोप IXS राम्रो उहाँलाई अनुरूप के निर्भर गर्दछ।
निर्माता गरेको सूची मा, तपाईं खेल र चिउँडो को उन्नत सुरक्षा र एकीकृत आन्तरिक सूर्य छज्जा, र क्लासिक संग integrals पाउन सक्नुहुन्छ खुला अनुहार हेलमेट इन्ड्युरो प्रेमीहरूलाई लागि हटाउन सकिने windscreen संग र सुपर स्टाइलिश विकल्पहरू। जवान सवार लागि डिजाइन कम आयामका व्यापक उपलब्ध मोडेल। बच्चालाई लागि outfit छनौट धेरै आमाबाबु लागि, टोप IXS पक्षमा मा निर्णायक तर्क सकारात्मक समीक्षा धेरै प्राप्त। तिनीहरूले स्विस गुणस्तर को राम्रो-योग्य प्रतिष्ठा पुष्टि गर्नुहोस्।
केही उदाहरण विचार
सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेल को एक मोटरसाइकल टोप IXS एच 1000. औसत मूल्य 6000 rubles मा, यो मोडेल उच्च गुणवत्ता उपकरण धेरै प्रशंसक पहुँचयोग्य बनाउन छ। 1.3 किलो कम वजन, निर्मित साँस, एकीकृत छज्जा र अतिरिक्त सूर्य छज्जा लागि वेंट (दुवै मोड्युलहरू एक हातले समायोजित गर्न सकिन्छ): हामीले निम्न सुविधाहरू ध्यान दिनुहोस्। यो टोप polycarbonate बनेको छ - विश्वसनीय र हल्का सामाग्री।
टोप IXS एच 114 को ग्राहक समीक्षा उल्लेखनीय एकमत। यो मोडेल पनि औसत मूल्य श्रेणी बुझाउँछ, तर धेरै मालिक यो शरीर को एक विस्तार कल - त्यसैले यसलाई आराम बस्छन। यो टोप को नङ सुरक्षा र उत्पादन को जीवन विस्तार गर्ने एक तर्साउने-प्रतिरोधी संरचना ढाकिएको छ। एक टोप bikers तपाईं खरीद मा खर्च गरेपछि, 4-5 वा बढी वर्ष सुरक्षा पाएको दावी चयन गर्नुहोस्। पहिलो सिजन अन्त मा अलग पर्दैन यो विकल्प, तपाईं पक्का हुन सक्छौं।
ब्रान्ड को सबैभन्दा महंगा मोडेल को एक - मोटरसाइकल टोप IXS एच 325. यो पायलट सुरक्षा वृद्धि, अभ्यास मा सबै उपलब्धिहरू निर्माता राख्नु र उहाँलाई सान्त्वना ग्यारेन्टी थिए जो एक स्टाइलिश मड्यूलर छ। 12 हजार मूल्य ट्याग मालिक को समीक्षा द्वारा न्याय, तिनीहरूलाई को कुनै पनि खर्च मुद्रा पछुताउनु थिएन, एकदम उच्च छ, तर।
किन्नु अघि विचार कुराहरू
सबैभन्दा हेलमेट भित्र IXS फोम सम्मिलित छ। तपाईं यस सामान लगाउने गर्दा एक सानो दबाव दिन, त्यसैले खरीद गर्दा टाउको मा दृढ बस्छन एक टोप चयन गर्नुहोस्। तथापि, हुँदैन कुनै पनि मामला मा धक्का।
तपाईं प्रयास गर्न अवसर जहाँ धेरै मालिक कडा एक स्थिर दोकान मा पहिलो खरीद बनाउन सुझाव दिन्छौं। भविष्यमा, तपाईंको आकार बुझेर तपाईं सामान एक बिक्रेता देखि आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
सोही, कम्पनी पनि अझ राम्रो आफ्नो टोप बनाउन र यसको सेवा जीवन लम्ब्याउनु हुनेछ सामान र स्पेयर पार्ट्स को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
कसरी आकार motocherepahi चयन गर्न: उपयोगी सुझावहरू
कसरी केटी गर्न माफी माग्न?
को ढल गर्न वाशिंग मिसिन को सही जडान
कसरी आफ्नो हात संग एक सुट Pippi Longstocking सी गर्न?
उम्कन द भूत टाउन: गाइड